भिजिट भिसामा जादै हुनुहुन्छ! पछी पछुताउनु पर्ला पढेर मात्र जानुहोस - Arghakhanchi Saptahik
Home खाडी बिशेष भिजिट भिसामा जादै हुनुहुन्छ! पछी पछुताउनु पर्ला पढेर मात्र जानुहोस
भिजिट भिसामा जादै हुनुहुन्छ! पछी पछुताउनु पर्ला पढेर मात्र जानुहोस
म र मेरा साथीहरुलाई भिजिट भिसामा जानु हुँदैन भन्ने थाहा थियो । तर हामीलाई भेट्ने वित्तिकै एजेन्टले यसरी लोभ्यायो कि हामीले जानेको र बुझेको कुरा पनि बिर्सियौं। टिकापुरबाट काठमाडौंको म्यानपावर कम्पनीसम्म पुर्‍याउने एजेन्टले हामीलाई पैसा तिरेर भिजिट भिसामा जाँदा राम्रो काम पाइन्छ र तलब पनि बढि हुन्छ भनेर फुक्र्याएकाे थियाे । त्यसैले हामीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जानकारी दिने स्थानीय स्वयंसेवक धनबहादुर बुढामगरको कुरै सुनेनौं।
त्यतिबेला उहाँका कुरा एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाए जस्तै गरेर भिजिट भिसामा युएई पुग्यौं । मसँगै टीकापुर ८ का रामकृष्ण चौधरी, जनक चौधरी र मंगल चौधरी र बर्दिया राजापुरका विजय चौधरीले जनही दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ तिरेका थियौं । त्यहाँ पुगेपछि हामीलाई एउटा होटलमा लगेर बस्नलाई कोठा दियो । एक हप्तासम्म त्यही होटलमा सरसफाईको काम गर्‍यौं ।
यहाँबाट लाँदा हामीलाई सारजहाको ह्वाइट हाउसमा रहेको रामदा होटलमा केहि दिन बसेपछि हाउस किपिङ्गको काम लगाइदिने भनेको थियो । तर पछि सफा गर्ने काममा लगायो । २८ दिनपछि एक्जिट हुन नेपाल जानुपर्छ भनेर नेपाल नै ल्यायो । काठमाडौं आइपुगेपछि घर जाउ, एक हप्तापछि काम फिक्स गरेर बोलाउछु भनेर पठायो ।तर दुई महिना भइसक्दा पनि केहि कुरा नआएपछि ठगिएको थाहा पायौं । तर अव छटपटिएर बस्नु बाहेक हामीसँग केहि विकल्प छैन । अहिले हामीले कैलालीमा रहेको वैदेशिक रोजगार सूचना तथा परामर्श केन्दमा निवेदन दिएका छौं ।
(मुकेश चौधरीसँगको कुराकानीमा आधारित )
रामकृष्ण चौधरी/ कैलाली ।